China Mpanamboatra hazo fihinam-boa avo lenta sy harato fiompiana vorona mpanamboatra sy mpamatsy | Kede Netting
Mpanamboatra hazo fihinam-boa tsara kalitao sy harato fiompiana vorona
Ny hamafin'ny dia avo roa heny noho ny mahazatra PE anti-vorona harato, vita amin'ny 8000d kofehy tokana; Ny loko ny harato dia: voasary, manga, maitso, mainty sy fotsy
Ny harato voaporofon'ny vorona dia karazana lamba vita amin'ny polyethylene ary heold miaraka amin'ny additives simika toy ny anti-aging sy anti-ultraviolet ho akora fototra. Izy io dia manana tanjaky ny tensile avo, fanoherana ny hafanana, ny fanoherana ny rano ary ny fanoherana ny harafesina. Izy io dia mahatohitra ny fahanterana, tsy misy poizina ary tsy misy tsiro, ary mora ny manary fako. Afaka mamono bibikely mahazatra, toy ny lalitra, moka, sns.
Ny fambolena fandrakofana harato tsy misy vorona dia teknôlôjia fambolena vaovao azo ampiharina sy miaro ny tontolo iainana izay mampitombo ny famokarana sy manangana sakana mitoka-monina artifisialy eo amin'ny scaffold mba hisakanana ny vorona tsy hiditra amin'ny harato, hanapaka ny lalan'ny fiompiana vorona, ary hifehy tsara ireo karazam-borona isan-karazany. , sns. Manaparitaka sy misoroka ny loza ateraky ny fihanaky ny aretina virosy. Ary manana ny asan'ny fifindran'ny hazavana, alokaloka antonony, sns., mamorona fepetra tsara ho an'ny fitomboan'ny vokatra, miantoka fa ny fampiharana ny pestiside simika amin'ny saha legioma dia mihena be, ka ny vokatra azo avy amin'ny vokatra dia avo lenta sy ara-pahasalamana, manome hery matanjaka amin'ny fampivoarana sy famokarana vokatra fambolena maitso tsy misy loto Fanomezana ara-teknika. Ny harato miady amin'ny vorona ihany koa dia manana ny asany amin'ny fanoherana ny loza voajanahary toy ny rivodoza sy ny havandra.
Ny orinasa dia manana ny zon'ny fananana ara-tsaina rehetra amin'ny harato vorona ary nampiditra fitaovana mandroso eran-tany maro avy any Alemaina Andrefana. Ity vokatra ity dia feno harona tenona, baoritra na harona plastika, mora entina. Ny fe-potoana fanaterana dia amin'ny ankapobeny 30-40 andro aorian'ny fanamafisana ny baiko. Raha manana fe-potoana fanaterana manokana ianao dia afaka mifandray amin'izy ireo ary miezaka ny mahafeno ny fepetra takian'ny fe-potoana fanaterana
harato (mm) 20,25,30,45, sns
Halavany (mm)　 18,27,54, namboarina
sakany (mm) 9,18,27,36
● Ny hamafin'ny dia avo roa heny noho ny mahazatra PE anti-vorona harato, vita amin'ny 8000d kofehy tokana;
● Ny kofehy tokana amin'ny heriny avo dia manamafy ny faran'ny harato roa;
● Ny fanoherana ny rivotra mahery, ny androm-piainany, tsy mora ny fahanterana.
teo aloha: 8 Taona ExporterGreen Shade Net ho an'ny lavarangana- Manao manokana amin'ny famokarana harato miady amin'ny biby azo zahana mba hisorohana ny biby sy ny biby - Kede Netting
Manaraka: Mpanamboatra harato fihanihana zavamaniry sy voly
Vorona harato harato
Vorona Wire Mesh
Fine Mesh Bird harato
Paneau solaire Bird Mesh